इटहरीका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले दिए पत्रकार महासंघलाई ३० धुर जग्गा - Deshko News Deshko News इटहरीका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले दिए पत्रकार महासंघलाई ३० धुर जग्गा - Deshko News
इटहरीका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले दिए पत्रकार महासंघलाई ३० धुर जग्गा
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले पत्रकार महासंघ सुनसरीलाई भवन बनाउँन जग्गा हस्तान्त्रण गरेको छ । मङगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले इटहरीमा ५ मा रहेको करिब ३० धुर जग्गा पत्रकार महासंघ सुनसरीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
सुनसरीको धरान ,इनरुवा लगायतका शहरमा महासंघको भवन बने पनि इटहरीमा पत्रकार महासंघको जग्गा समेत नभएको भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले महासंघलाई जग्गा दिएको हो । जग्गा दिने निर्णय सार्वजनिक गदै इटहरीको मेयर द्धारिकलाल चौधरीले पत्रकारहरुको बृद्धिविकासमा सधै लाग्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
पत्रकार महासंघको भवन बनाउँन उपयुक्त हुने भन्दै जग्गा दिएको हो । प्रदेश १ कै केन्द्रमा रहेको इटहरीलाई जग्गा सँगै भवन बनाउँन समेत आवश्यक सहयोग गर्ने मेयर चौधरीले प्रतिबद्धता जनाएका हुन । पत्रकाहरुको हकहितको लागि सदैब सकरात्मक रहेको उनको भनाई थियो ।
इटहरीका उपमेयर लक्ष्मी गौतमले इटहरीको विकासमा पत्रकारहरुको भुमिका अहम रहेको बताईन । इटहरीको भवनलाई पत्रकार महासंघ प्रदेशकै कार्यलय राख्न आग्रह समेत गरिन । पत्रकार महासंघको कार्यलय इटहरीमा हुनु आवश्यक भएको बताईन ।
यता पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष अमर खड्काले जग्गा प्राप्त भए सँगै जाडै भवन निमार्णको काम सुरु गर्ने बताए । खड्काले भने इटहरीमा कार्यलय राख्न आवश्यक थियो हामी चाडै काम सुरु गछौ । केहि समय पछि नै भवन निमार्णको कामले प्रथामिकता पाउने खड्काको भनाई थियो ।
स्ववियु निर्वाचनको तयारी सुरु
काठमाडौं, पुस २९ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियु निर्वाचनको तयारी गर्न मातहतका क्याम्पसलाई
जाँडमा पुराना चप्पल !
वागलुङ पुस २५ जाँड बनाउन के प्रयोग गरिन्छ ? स्वाभाविक उत्त। हुन्छ, अन्न । तर,
छाउगोठ नष्ट गर्ने अभियान तीव्र
दैलेख, पुस २३ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्लाका पश्चिम क्षेत्रमा रहेका विभिन्न